Bitcoin voalohany voatanisa ao amin'ny orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany Tel Aviv fifanakalozana tahiry - Blockchain News
Bitcoin voalohany voatanisa ao amin'ny orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany Tel Aviv fifanakalozana tahiry
Kanadiana cryptocurrency orinasa fitrandrahana Bitfarms efa vita ny fiombonana amin'ny Tel Aviv-voatanisa toko nizotra orinasa mpitrandraka harena ankibon'ny tany crypto Blockchain harena ankibon'ny tany Ltd., dia nanambara tao amin'ny fametrahana ny Tel Aviv Stock Exchange Alahady.
Ny fanambarana dia miteraka ny orinasa voalohany amin'ny cryptocurrency ho toy ny fototra fandraharahana ho voasoratra ao amin'ny fifanakalozana.
Ny roa toko voalohany nanambara fifanarahana Ny fanambarana-ary ny drafitra mba lisitra ao amin'ny Tel Aviv Stock Exchange ho toy ny crypto-mifantoka orinasa-in Desambra 2017, fa niatrika fanaraha-maso avy amin'ny Israeliana regulator. Tamin'ny volana Martsa, ny orinasa dia nanambara fa ny Fiarovana Israeliana Manampahefana efa vita ny fanadihadiana ho any Ny fanambarana.
Bitfarms miasa trano efatra ao amin'ny faritanin'i Québec, ary amin'izao fotoana izao ny fananganana ny foibe computing fahadimy.
US Fiarovana regulator misokatra
US Fiarovana regula ...
Binance nahazo taratasy fampitandremana avy amin'ny Japoney regulator
Japana ambony financia ...
Previous Post:Coinsource dia naparitaka Bitcoin ATM
Next Post:Mastercard mampiasa blockchain mba hiady sandoka ID